पोखरा महोत्सवको टिकटबाट पोखरा मिट मार्टमा मासु किन्दा ३० रुपैया छुट – Online Annapurna
२८ पुष २०७६, सोमबार १६:३३ January 13, 2020 113 Views
पोखरा २८ पुस । दशौ संस्करणको पोखरा महोत्सवको हरेक टिकटबाट पोखरा मिट मार्ट प्रालिमा कुनैपनि मासु किन्दा प्रतिकेजी ३० रुपैया छुट पाइने भएको छ । यसको ब्यवस्था पोखरा महोत्सव आयोजक युनाईटेड क्लवले महोत्सव प्रायोजक पोखरा मिट मार्ट प्रा. लि. संगको सहकार्यमा गर्ने भएको हो ।
गुरुङका अनुसार उक्त स्किम पोखरा महोत्सव अवधि पुष २९ देखी माघ १२ गते सम्म लागु हुनेछ । पोखरा मिट मार्ट पोखराको लेकसाईडमा विगत ८ वर्षदेखी सञ्चालनमा आएको र अमरसिंह चोकमा विगत १ महिनादेखी सञ्चालनमा आएको हो ।
पोखरा मिट मार्टमा खसी, कुखुरा, बंगुर, भैसीका मासु सहित माछा र मासुजन्य वस्तुहरु उपलब्ध रहेको छ ।